गायिका आस्था राउतले महिला प्रहरीलाई भनिन्, ‘मान्छे चिनेर कुरा गर’ – Lokpati.com
प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड नेकपा सरकार प्रधानमन्त्री अपराध नेपाल प्रहरी राशिफल केपी शर्मा ओली चितवन अमेरिका नेपाली काँग्रेस पक्राउ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मृत्यु
गायिका आस्था राउतले महिला प्रहरीलाई भनिन्, ‘मान्छे चिनेर कुरा गर’
By लाेकपाटी न्यूज On २ माघ २०७६, बिहीबार १३:२३
काठमाडौं, २ माघ। गायिका आस्था राउतले आफूलाई महिला प्रहरीले असभ्य व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी छन्।
भद्रपुर विमानस्थलमा रमिता नामक महिला प्रहरीले उनीमाथि असभ्य व्यवहार गरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखेकी हुन्।
बुधबार सिक्किम जाँदै गरेकी गायिका राउतलाई झापास्थित भद्रपुर विमानस्थलमा खटिएकी प्रहरीले उनलाई असभ्य व्यवहार गरेको बताइन्। ‘उनले ठूला पदका प्रहरीले मात्रै राम्रो भाषाको प्रयोग गर्ने हो ?’, भन्दै प्रश्न गरेकी छन्। ’ठूला-ठूला पोष्टका इन्स्पेक्टर, डिएसपी, आइजिपीहरूले मात्रै राम्रो भाषामा बोल्ने हो ? उनीहरूले मात्रै हजुर राजबक्सिस्योस्, दर्शन गर्ने, ‘उनले प्रश्न गरिन्,’ तल्लो तहका प्रहरीले चाहिँ तँ भन्ने अरूलाई ? ठूलोले चाहिँ हजुर स्यो लगाएर हुन्छ ?’
तल्लो तहको रूट नै फोहोर भएको भन्दै उनले रूटलाई बनाउन आग्रह गरिन्। जरै गन्धा भएपछि माथि टुप्पोले मात्र दर्शन दर्शन गर्नु असोभनीय भएको उनले बताइन्। ’विमानस्थलमा चेकजाँच गर्दा मेरो हातमा कफी थियो, लुगा छामेर चेक गर्नुस् न भन्दा खोज… भनिन्,’ राउतले फेसबुक लाइभमा भनिन्,’त्यही हो बोल्ने शैली, पुलिस हाम्रो साथी भन्ने नारा हटा…’ उनले आफूमाथि त्यसरी बोलेपछि औंला ठड्याएर ’मान्छे चिनेर कुरा गर’ भन्दै हिँडेको बताइन्।
उनले विमानस्थलबाट बाहिरिएर भारततर्फ जाँदै गर्दा फेसबुकमा २५ मिनेट लाइभ आएर प्रहरीले गरेको व्यवहारप्रति आक्रोश पोखेकी हुन्। गायिका राउतले प्रहरी हाम्रो साथी भन्ने नारामा मात्रै सीमित रहेको गुनासोसमेत गरिन्। तल्लो तहका प्रहरीहरूले बोल्ने शैली सिक्न र ठूला पदका प्रहरीले सिकाउन समेत सुझाइन्। तर अहिले उनले भिडिओ हटाएकी छन्। रिसको झोंकमा फेसबुक लाइभमा आएर आफूले बढी नै बोलेको भए त्यसको लागि उनले माफी मागेकी छन्। फेसबुकमा पोष्ट गर्दै उनले लेखेकी छन्। तर उनीहरूले (प्रहरी) आफ्नो बोल्ने शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ।
सुखी नेपालीको लागि उचित विपद व्यवस्थापन आवश्यक : गृहमन्त्री थापा